Ngabe i-Australian Shepherd Corgi ixuba inja yomndeni enhle? - Izinhlobo
Yakhiwe ngesitoko semfuyo eqinile, inhlanganisela yase-Australia Shepherd Corgi iyisilwane esilungele abalimi nemindeni enamandla.
Hlangana noLinus, inhlanganisela yase-Australia Shepherd Corgi - Umthombo wesithombe
Kubizwe futhi i- U-Aussie Corgi, Corgherd no-Auggie (kwesinye isikhathi sipelwa njengo-Augie), lena yi-hybrid eyodwa ongeke uthande ukuyiphuthelwa. Qhubeka ufunde ukuze ubone ukuthi yini eyenza le fido ikhetheke kangaka!
Umlando wesiphambano seCorgi Aussie
Inja ye-Auggie ibukeka kanjani?
Isimo: Yini ongayilindela ku-Aussie Corgi?
Ukunakekela inhlanganisela yakho yase-Australia Shepherd Corgi
Ihlala isikhathi esingakanani i-Corgi yase-Australia?
Kubiza malini ukuxuba kwe-Aussie Corgi?
Ukuxubana okuningi kwe-Corgi ne-Aussie!
Ngabe inhlanganisela yase-Australia Shepherd Corgi ingajoyina iphakethe lakho?
Njengezinja eziningi zabaklami, indaba yemvelaphi ka-Auggie ayibhalwa kakhulu. Kubukeka sengathi kungenzeka ukuthi babekhona isikhashana ngaphambi kokuba ukuzala ngenhloso kuqale. Ayikho indlela yokwazi ngokuqinisekile, noma kunjalo.
Namuhla, i-Aussie Corgis ayaziwa yi-American Kennel Club (AKC).
Noma kunjalo, izinhlangano zezinhlobo ezihamba phambili ezinjenge- I-Designer Dogs Kennel Club (DDKC), Inja Registry yaseMelika (DRA), I-American Canine Hybrid Club (ACHC), kanye I-International Designer Canine Registry (IDCR) bayabavuma.
Kodwa-ke, singakwazi ukwazi kangcono lolu hlobo oluxubekile ngokuhlangana nabazali balo.
Abelusi base-Australia: inja yamaphupho yomfuyi
Abelusi Base-Australia , noma ama-Aussies ngamafuphi, baqala ukwalusa eduze kwezintaba zasePyrenees. Bathuthela e-Australia nabanikazi babo, kwathi kamuva baya e-United States.
Kulapha e-Old West lapho ama-Aussies aqinisa indawo yawo njengoba izinkomo nabelusi bezimvu abavelele .
Futhi lapho i Umalusi omncane wase-Australia waba khona. Abelusi abancane base-Aussie bakhuliswa ngokukhetha ukudala inja yokwelusa ehlangene, manje ebizwa manje Umalusi waseMelika omncane .
Bobabili abajwayelekile kanye nabakwaMini Australian Shepherds bayaqhubeka besebenza emapulazini aseMelika kuze kube namuhla. Ngaphezu kwalokho, bayathandeka ukubona emincintiswaneni.
Ukusuka ekuthobeleni ubukhali, abelusi base-Australia abayeki ukumangala!
Hlangana neCorgi ethandekayo
Corgis kukhona izinja zokwalusa ezimangelengele , esukela emuva okungenani eminyakeni eyi-1000. Ezinye izazi-mlando zithi uCorgis walethwa okokuqala eWales kudala ngo-1200 BC!
Ubuwazi ukuthi kunezinhlobo ezimbili ezihlukile zeCorgi? I- I-Pembroke Welsh Corgi futhi ICardigan Welsh Corgi yayijwayele ukuhlukaniswa njengohlobo olulodwa, kepha lokhu kwashintsha ngawo-1930.
Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili ukubukeka kwazo. (AmaCardigans anezindlebe ezizungezile nemisila emide.) Imvamisa, amaPembroke asetshenziselwa ukwakha iCorgherd, kepha izinhlobo zohlobo lweCorgi zingaba ngumzali we-Auggie pup.
Uzobona ukuthi izinja zokuxuba eziningi ze-Australian Shepherd Corgi zakhiwe njenge-Corgis ngejazi le-Aussie.
Uboya babo cishe buba yimibala emibili noma ngaphezulu, kepha uzobona kaningi ama-Auggies anemibala emithathu ekuhlanganisweni kwe- mhlophe, mnyama, tan, nsundu, noma merle .
Ama-corgherd anezingubo eziphindwe kabili, eziphakathi nendawo ezide eziwela phezu kwemizimba yazo emide nemilenze emifushane. Cabanga ngalesi sihlanganisi njengesinkwa esingaxakile nesicijile.
Hlangana noFrankie, inja yakwa-Auggie - Umthombo wesithombe
Ukwenza zibukeke ngisho nangaphezulu, i-Aussie Corgis ijwayele ukuba nezindlebe ezicijile, ezingunxantathu. Zime ziqondile noma zigoqiwe. Futhi amehlo abo angahle abe okuluhlaza okwesibhakabhaka, onsundu, noma kokubili .
Ungathola ama-Auggies anemisila emide, ama-bobtails, noma umsila nhlobo. Kepha noma ngabe umaka we-Aussie Corgi wakho kanye nezici zomzimba, le pooch impela ingu-turn-head!
Ingxube ye-Australian Shepherd Corgi izoba nkulu kangakanani?
Ama-Auggies akhule ngokugcwele makhulu kancane kunenja yakho emaphakathi ethangeni. Iningi lama-Corgis ase-Australia anesisindo 20-30 amakhilogremu (9-14 kg) futhi ume 10-13 amayintshi (25-33 cm) ubude ngokuba mdala.
Imidlwane evela e-Aussie ejwayelekile ingaba sohlangothini olukhulu, kuyilapho imidlwane evela kuMiniature Australian Shepherd izoba mncane kakhulu. Yize bebancane, bona ayikwazi ukubekezelela izindlu ezincane noma amafulethi .
Banikezwe ukukhetha, babekhetha ikhaya elibanzi elinendawo yokusebenzisa. Uma ungenakho ukunethezeka kwezikhala ezivulekile, kuzodingeka ukuthi ukhuthale kakhulu ekusebenziseni lolu hlobo lwe-hyper.
Ngezakhi zofuzo ze-Australian Shepherd noCorgi, uCorgherd uyikho kokubili spunky futhi uzimisele . Ubuntu babo bunjalo ilungele abathandi bezinja abangomakadebona ngubani ongashaya ibhalansi phakathi kwenkululeko nokuqina.
Abelusi enhliziyweni, ama-Auggies afuyelwa ukusebenza. Bahlakaniphile, banamandla, futhi bagcwele ubumnandi.
Qaphela ukuthi uNorbert, umdlwane ka-Aussie Corgi ozijabulisa futhi oligugu, ukhombisa kanjani izimpawu zokulangazelela nokuzethemba.
Ngaphezu kokuba yilungu lepakethe elinamandla, ama-Augies enza amawashi amahle .
Cabanga ngakho: izinja ezelusayo zidinga ukuxwayisa abantu bazo ngezilwane ezingabahlasela, akunjalo? Ngakho-ke kunengqondo ukuthi ingxube yakho ye-Aussie Corgi ifuna ukukuvikela nawe. Qiniseka ukuthi i-Corgherd yakho ezimela ngokwemvelo izokhonkotha lapho kuqala uphawu lwengozi .
Ukukhonkotha kungaba kakhulu ngoba abazi ngaso sonke isikhathi ukuthi kufanele bacishe nini lezo zimo zokwalusa. Gxila emizamweni yokuqala yokuqeqeshwa ekuqedeni lezi zinkinga ezingaba khona ku-Auggie ogcwele kahle, onomndeni.
Lokhu kubaluleke kakhulu kumaphakethe amakhulu. Izindlwana ezincane zasendlini kanye nezinsana yizo ezibhekiswe kakhulu ekwaluseni okungafanele. Futhi akudingeki ukuthi sikutshele ukuthi bazokuthokozela kangakanani ukukhokhiswa ngokungahambisani nentando yabo.
Kuwukuhlakanipha futhi ukufundisa izingane zakho ukuthi ziphendule kanjani uma i-fido yakho ikhohlwa imikhuba yakhe. Ukuqeqesha i-Auggie yakho kufanele kube ngumzamo womndeni, ngakho-ke lokhu kuqhekeka kungenzeka kungabi kuhle emakhaya anezingane ezincane .
Ngesakhiwo esifanele, ukuhlanganiswa kwe-Australian Shepherd Corgi kungumlingani omuhle kakhulu we-canine. Bayakwenza kudinga ukunakwa njalo , noma kunjalo. Lokhu akugcini ngokugcina ngokuhlakanipha okucijile kokuqeqeshwa, kepha futhi kuqinisa isibopho sakho.
Uma unesikhathi nolwazi lokusebenzisa kahle ubuhlakani be-Auggie kanye ne-sass, le kungaba yinja yakho!
I-Aussie Corgis ayikona ukunakekelwa okuphezulu ncamashi, kepha zidinga ukuqhuma kancane. Ngakho-ke uzosebenzisa isikhathi esingakanani ukunakekela lo mdlwane? Qhubeka ufunda ukuze ubone ukuthi yini okulondoloziwe!
Ukulungisa inja yakho ye-Auggie
Hlangana no-Apollo, inja yakwa-Auggie - Umthombo wesithombe
Ama-corgherds AYONA i-hypoallergenic. Banjalo imishini yokuchitha ezidinga ukuxubha kaningana ngesonto , uma kungenjalo nsuku zonke.
Kepha qaphela! Ukugeza i-Aussie Corgi kaningi kakhulu kungalimaza ijazi labo, njengoba kungagunda nabo.
Ukugcina uboya obuthuthukisayo bunganqwabeki, nikeza ingane yakho ibhavu elingenamanzi nge imoto eyomile ukugwema ukomisa uboya babo noma ukuwayisa e-doggy spa ukuze kutholwe ubungcweti obuthile.
Vele, awufuni ukukhohlwa ezabo izinzipho , izindlebe , namehlo.
Ukusika uzipho lukaFido kanye njalo emavikini ambalwa kuvame ukulingana, kepha kufanele uhlole izindlebe namehlo abo nsuku zonke . Susa noma iyiphi i-gunk ngendwangu ehlanzekile noma Sula , futhi uxwayise udokotela wezilwane uma ubona izimpawu zokucasuka noma ukutheleleka.
Ukukhetha ukudla kwenja okuhle kakhulu kwe-Aussie Corgi yakho
I-Purebred Corgis idla izinkomishi zokudla ezifika ku-1.5 kuya ku-1.5 ngosuku, kuyilapho ama-Aussies angenalutho angenza isikhafu kuze kufike ezinkomishini ezi-4. Umxube wakho we-Corgi Australian Shepherd kungenzeka uwe endaweni ethile phakathi kwalolo hlu.
Ama-Auggies adume ngokuba yimigodi engenamkhawulo. Bathanda ukudla futhi othambekele ekudleni ngokweqile.
Ukwanda ngokweqile kwesisindo kungalimaza imilenze emifushane ye-Aussie Corgi nomhlane omude. Ukuze uzigcine ziphilile, qiniseka ukuthi ukungena kwekhalori yakho yansuku zonke kwe-canine kuhambisana nobudala bakhe, ubukhulu, nezinga lomsebenzi. Iziphakeli ezihamba kancane kungasiza, futhi.
Kufanele futhi sisho ukuthi ukungezwani komzimba nokudla akuzwakali kule nhlanganisela. Uma u-Auggie wakho ekhombisa izimpawu zesisu esibucayi noma ukusabela okweqile, kungadingeka ukuthi ushintshe ukudla kwenja yakhe akukho okusanhlamvu , ayinankukhu , noma khuluma nodokotela wezilwane wakho ngokuthi angakulungisa kanjani indlela adla ngayo.
Hlangana noBenny, ingxube ye-Aussie Corgi - Umthombo wesithombe
Ukuzivocavoca: ama-Auggies adinga malini?
Izingxube ze-Australian Shepherd Corgi zihlakaniphile futhi zisebenza kakhulu. Zizohlanya ngokuphelele ngaphandle Amahora ama-2 wokuzivocavoca nsuku zonke .
Lokhu akusho ukuthi iCorgherd yakho idinga ukugijima amahora ama-2 iqonde! Ufuna ukuqaphela ukuthi ungabeki ingcindezi enkulu emgogodleni noma emilenzeni.
Hlukanisa umsebenzi womngane wakho woboya ngezikhathi ezi-2 ukuya kwezingu-3 zokuqina okuphezulu. Hlanganisa nomdlalo wokulanda, uhambo oluya epaki, noma ngisho nokubhukuda.
Iningi le-Aussie Corgis zikhula esimweni sezulu esilinganiselayo , ngakho-ke thatha izinyathelo zokuqapha uma uhlala ezindaweni ezifudumele noma ezipholile. Gwema ukushisa ngokweqile ngokuhamba no-Auggie wakho ekuseni nantambama.
Funa i isidladla futhi amajezi athokomele ukugcina i-doggo yakho ikhululekile uma kubanda.
Izinja ze-Auggie zingenye yezinhlobo ezihamba phambili ezinempilo ezijabulela isikhathi esimaphakathi sempilo ye- Iminyaka engu-12-15 . Ukuhlala uphambili kunoma yiziphi izinkinga ezingaba khona zezempilo kubalulekile ekusizeni i-Fido ukuthi ifinyelele kulowo nyaka weminyaka engu-15, noma kunjalo.
Qapha izimo zamehlo , njengama-cataract kanye ne-retrophy retrophy eqhubekayo (PRA). I-hip dysplasia nezinkinga zomgogodla kukhona nokukhathazeka.
Izingxube ze-Australian Shepherd Corgi nazo zingaba sengozini yokungezwa, ukuzwela kwemithi eminingi , futhi Isifo sika-von Willebrand .
Ezinye zalezi zimo zingaba zimbi impela. Qiniseka ukuthi uCerggherd wakho uvela kubazali abaphilile, futhi ucabangele ukufuna udokotela wezilwane onolwazi lokwelapha ama-Aussies, uCorgis, kanye nenzalo yabo.
Njengoba izinhlobo zomklami ziyahamba, ama-Corgis ase-Australia ayabiza kakhulu! Iningi lezinja ze-Auggie zise- $ 800- $ 1200 uhla lwamanani. Njengoba kunikezwe ukuthandwa kwalezi zinhlobo zabazali be-hybrid, singakubheka lokhu njengokuntshontsha.
Khumbula ukuthi izindleko zisengakhuphuka noma zehle, kuya ngendawo yokuzalanisa kanye nokuthandwa kwekennel, kanye nokutholakala kwegazi lomzali nemidlwane.
Zihlomise nge ucwaningo olunzulu futhi imibuzo ebalulekile ukuqinisekisa ukuthi uthenga ingxube yakho yase-Australia Shepherd Corgi kumfuyi onedumela.
Abathengisi abaningi be-puppy abanesibopho baze banikeze ukuthi usethe i-aphoyintimenti vakashela i-pup futhi uhlangane nabazali bayo kanye nabantu abalala nodoti. Ngenkathi ulapho, cela bheka amarekhodi ezokwelapha ezinja ukuqinisekisa ukuthi izindlela zokuzalanisa ezifanele ziyalandelwa nokuthi yonke iphilile.
Hlangana noPoppy, ingxube ye-Aussie Corgi - Umthombo wesithombe
Ukukhetha umfuyi wokuxuba owaziwayo wase-Australia
Uyokujabulela ukwazi ukuthi ukuthola imidlwane ethandwa kakhulu ye-Auggie edayiswayo akunzima.
Isici esiyingqayizivele sabazalisi be-Auggie ukuthi abahlali bezala ama-Auggies kuphela. Uzobona ukuthi labo abanezidlwane ze-Aussie Corgi nabo bazala i-puregred Corgis noma iMini Aussies.
Zingaba nodoti lwenhlobonhlobo ngayinye ngezikhathi ezahlukahlukene unyaka wonke. Kuyafaneleka ukubanikeza ucingo ukuze bacacise ukuthi nini noma uma belindele udoti we-hybrid noma nini kungekudala.
Ukonga isikhathi, siqoqe abambalwa abangahle babe ngabazalisi be-Auggie ukuze ubabheke:
Imidlwane engu-3L ye-Augie (EMissouri)
I-A3 Ranch Corgis nama-Auggies (Ukukhala, KULUNGILE)
I-TNT Custom Corgis (IPipestem, i-WV)
Ukuthola i-Auggie yokwamukelwa
Ukuthola i-Aussie Corgi kuyindlela enhle yokonga imali ethile nokunikeza isilwane esidinga ikhaya elinothando. Kuyinto yokuwina!
Izindawo zokukhosela zasendaweni kanye namahhovisi ama-vets yizindawo ezinhle zokuqala ukusesha kwakho. Ukulinda ku-Auggie ukudlula esifundeni sakho sokutakula izilwane akusebenzi kahle, noma kunjalo.
Bheka nezinhlangano zokutholwa eziqondene nohlobo oluthile, futhi. Zivame ukukhulisa inzalo, ngakho-ke ungaba nenhlanhla yokuhamba kulowo mzila.
Nayi eminye i-Aussie ne-Corgi yokutakula ukusiza ukuqala usesho lwakho:
I-Aussie ne-Me Animal Rescue (ISarasota, FL)
Inombolo yosizo ye-Aussie Rescue & Placement (ISt. George, UT)
Howelling Kennels Corgi & Izinkomo Dog Rescue (E-Springfield, OH)
Ukuhlengwa Kwezinja Okungcono Kakhulu KweNdlovukazi (ENyakatho Hollywood, CA)
Kunamathani wezinja ezinhle zokuklama laphaya, kanti i-Auggie ingenye yazo kuphela. Nazi ezinye izingxube ze-Australia Shepherd neziphambano zeCorgi okufanele uzicabangele:
I-Australian Shepherd Lab mix (Aussiedor)
Ukuhlanganiswa kwe-Australian Shepherd Golden Retriever ( I-Australian Retriever )
Ukuhlanganiswa kukaCorgi Siberian Husky (IHorgi)
Ukuhlanganiswa kweCorgi German Shepherd (UCorman Shepherd)
Hlangana ne-Squire, ingxube ye-Australian Shepherd Corgi - Umthombo wesithombe
Ama-Auggies awakhathaleli ukuthi ngabe azulazula emuva naphambili ngaphesheya kwegceke noma aqoqa izinkomo zakho. Aussie Corgis phila ngomsebenzi nenjabulo , ngokulandelana.
Lokhu kuzimisela ngothando yikho okwenza i-Auggie ifanele kangcono abanikazi abanolwazi futhi imindeni enezingane ezindala . I-canine ezethembayo idinga umholi othembekile, angithi.
Ithini imibono yakho ngomxube ojabulayo wase-Australia Shepherd Corgi? Singathanda ukuzwa kuwe kumazwana abekiwe.
I-Rottweiler Lab Mix: I-Complete Labrottie Inja Yokuzalela Inja
umugqa we-collie lab mix mix
amagama ezinja ezimhlophe zabesifazane
amagama amahle wabesifazane ophuzi
amagama ezinja zesilisa ama-huskies
ibiza malini imbobo ebomvu yempumulo